Posted by: chhepyastra weekly | अगस्ट 22, 2010
दुवै सेनालाई एकै ठाउामा राखी राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्छ
हितमान शाक्य,सुमन’, पोलिटब्यूरो सदस्य- एकीकृत नेकपा माओवादी
० चार पटक मतदान गर्दा पनि मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिन सक्नु भएन, अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
चार-चार पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुादा पनि आवश्यक बहुमत प्राप्त हुन सकेन जसको कारणले देश अहिले करिब-करिब सरकारविहीनताको अवस्थामा जाादै छ । यो हुनुको पछाडि राजनीतिक पार्टीहरूले सहमतीय प्रणालीबाट बुहमतीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरे । खासगरी कााग्रेस, एमालेले जुन निर्णयको पक्ष लिए, त्यसको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौा । तसर्थ, यस विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीले गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ । देश अहिले सरकारविहीनताको अवस्थामा पुग्नु, अनिर्णयको अवस्थामा पुग्नुको परिस्थितिले देशैभरि अन्योलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको चरणबाट गुजि्रएको देश, नयाा ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा अहिले पुनः अन्योलताको स्थिति देखापरेकोले जनतालाई नैराश्यता पैदा गराएको छ । यी सबै परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । यो अनिर्णयको बन्दीलाई फुकाउनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा पुनः एक समझदारी विकास गरेर अगाडि बढे यो समस्याको समाधान हुन्छ ।
० तपाईंको पार्टीले भारतीय हस्तक्षेपका कारण सरकार गठन हुन सकेन भन्दै आएको छ र तपाईंका पार्टीका सभासद्लाई भारतीय दूतावासबाट धम्की आएको पनि सार्वजनिक भयो, यस विषयमा प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
निश्चित रूपले हाम्रो देश जब सुगौली सन्धिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो, त्यही समयदेखि नै यो अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट अगाडि बढ्दैछ, हाम्रो देश स्वतन्त्र छैन । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा साम्राज्यवाद विस्तारवादको प्रभाव छ र त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप हामीले भोग्दै आएका छौा र त्यो हस्तक्षेपको परिमाण अहिले झन् बढ्दै गएको अनुभूति हामीलाई भएको छ । सरकार गठन गर्ने क्रममा पनि यसलाई हामीले प्रत्यक्ष भोग्यौा । दूतहरू आएर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्ने, घरघर चाहार्ने, दबाब दिने र व्यक्ति-व्यक्तिलाई भेटी दबाब दिने र राजनीतिक समीकरण बनाउने, भत्काउने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र कठ्पुतली सरकारलाई जीवन्तता दिन खोज्ने तथा एउटा कठ्पुतली सरकार बद्नाम भएपछि अर्को कठ्पुतली सरकार गठन गर्न कोसिस गर्ने यो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको पुरानो खेल हो र त्यो पुरानो खेलमा अहिले पनि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका शासकहरू त्यही ढङ्गले सोचिरहेका छन्, त्यो दुःखद पक्ष हो । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने जुन कोसिस गरिरहेको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र हाम्रो देशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढ्ने वातावरण दिनुपर्छ । हाम्रो सभासद्लाई जसरी प्रत्यक्षरूपमा भारतीय दूतावासबाट धम्की दिने कोसिस भयो । यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि कति नाङ्गो ढङ्गले हाम्रो छिमेकी मुलुक हाम्रो देशलाई गुलाम बनाउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । हामीले यसको विरोध, विरोधपत्र बुझाएर गरेका छौा तर त्यसको कृत्रिम जवाफ दिएर टारेको छ, यो सबैले बुझेकै कुरा हो ।
० तर, तपाईंको आप\_नै पार्टीको अन्तरविरोध सरकार नबन्नुको कारण हो भनिन्छ नि ?
यो सत्य होइन । हाम्रो पार्टीभित्र विवाद भएर सरकार बन्ने विषय अप्ठ्यारोमा परेको सााचो होइन । सााचो कुरा के हो भने “हामी माक्र्सवाद मान्छौा माक्र्सवाद भनेको द्वन्द्वको विश्लेषण गर्ने, संघर्षलाई मान्यता दिने, दर्शन हो । हरेक वस्तुमा अन्तरविरोध हुन्छ, विपरीत तत्वहरू हुन्छ, त्यसैको कारण विकास र विनाश दुवै हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामी स्वीकार्छौं र त्यही हिसाबले पार्टीभित्र पनि अन्तरविरोध सधैा भइरहन्छन्, फरक यति हो कहिले सुषुप्त अवस्थामा हुन्छन्, कहिले सामान्य अवस्थामा हुन्छन् भने कहिले तीव्रतर ढङ्गले अगाडि बढ्छन्, यो मान्यता हामीले मान्दै आएको मान्यता हो । यसरी हेर्दा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र पनि केही समस्याहरू पैदा भएका छन् । वर्गसंघर्षको विकास सागसागै अर्थात् वर्गसंघर्षको परिवर्तन सागसागै अन्तरसंघर्षमा पनि त्यो प्रभावहरू पर्ने गर्दछ । त्यो उच्च, मध्यम र सामान्य हुने गर्दछ । अहिले हामी महान् जनयुद्धको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्दा नेपाली क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने सवालमा पार्टीभित्र छलफल, बहस चलिरहेको छ । तर, सरकार गठन गर्ने सवालमा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । पार्टीको आधिकारिक बैठकहरूमा जुन निर्णय भएका छन्, ती सबैमा एकता र सहमति छ ।
० तपाईंले पार्टीभित्र विवाद छैन भन्नुभयो तर सञ्चार माध्यममा छरपस्ट धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् नि ?
हाम्रा केही कुरालाई मिडियाले अतिरञ्जित तवरले प्रचार-प्रसार गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । एकातिर कुनै तत्वबाट सञ्चालित मिडियाहरूको उद्देश्य हाम्रो पार्टीलाई फुटाउने र कमजोर बनाउने छ भने अर्कोतिर हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बोल्ने क्रममा भएका कमीकमजोरीका कारण पनि केही समस्या परेको छ । तर, ती आधिकारिक विषय होइनन् । मुख्य विषय पार्टीको निर्णय प्रक्रिया हो त्यसमा हाम्रो कुनै विवाद छैन । बाहिर बोलिएको विषयले पार्टीलाई खासै असर पुर्‍याउादैन ।
० नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना दुवैले भर्ना खोलेका छन्, यसले शान्तिप्रक्रियालाई असर पुर्‍याउादैन र ?
हो, यसले शान्ति र संविधानलाई असर पुर्‍याउने भएर नै छलफल र बहसहरू भइरहेका छन्, शान्तिप्रक्रियामा आउादा भएको सम्झौतालाई सबैले पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेनाको तर्फबाट जुन भर्ती अभियान भइरहेको छ, त्यसको विरोध भइरहेको थियो र अदालतसम्म पनि पुग्यो तर अहिले पनि उसले भर्ना अभियान खोलेको छ र शान्तिप्रक्रिया सुरु हुादाको संख्यामा रिक्त भएका मात्र पूर्ति गर्ने बताएको छ । त्यो एउटा पक्ष हो तर शान्तिसम्झौताको मुख्य पक्ष भनेको सैन्य सवालहरूमा दुवै पक्षले नयाा भर्ना नगर्ने निर्णय भएको हो, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ र पालना गर्नुपर्छ । सरकारले एक पक्षीय ढङ्गले शान्तिसम्झौतालाई उल्लंघन गर्दै भर्ना अभियान बढाउाछ भने जनमुक्ति सेनाले पनि भर्ना गर्न पाउनुपर्छ र त्यो मान्यता दुवैलाई हुनुपर्छ । अहिले २-४ हजार सेना खाली हुादैमा देशमा संकट आउने होइन, यो निहुा खोज्ने काम मात्र हो र शान्तिप्रक्रियालाई भङ्ग गर्ने कोसिस हो । हामी चाहन्छौा- दुवै सेनाको समायोजन होस्, राष्ट्रिय सेना बनोस् र फेरि यो देश द्वन्द्वमा जानु नपरोस् । शान्तिप्रक्रियाबाट देशको उन्नति, प्रगति गर्न पाइयोस् भन्ने आमजनताको चाहनालाई कुठाराघात गर्दै फेरि यो देशलाई द्वन्द्वमा लाने कोसिस जनतालाई स्वीकार्य छैन, यो जनताबाट नाङ्गनिे काम मात्र हो ।
० नेपाली सेनालाई कााग्रेस, एमालेलगायतका दलले पेवा ठान्ने, जनमुक्ति सेनालाई माओवादीको मात्र ठान्ने मानसिकताबाट माथि नउठेसम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला त ?
हिजो हामीले आमने-सामने लडाइा लडेकै हो । यो वर्गद्वन्द्वको अवस्थामा हामीले लडाइा छेड्यौा संघर्ष गर्‍यौा, यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर, अहिलेको चाहना र आवश्यकता भनेको दुवै सेनालाई एक गरी राष्ट्रिय सेना बनाउनु नै हो । दुवै सेनालाई समायोजन गरी जनताको सेना बनाउनुपर्छ । यही मान्यतालाई लागू गर्न हामी तयार छौा । अहिलेको नेपाली सेनालाई सााच्चै नेपालीहरूको सेना बनाउनुपर्छ । सेनाभित्र लोकतान्त्रीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ अन्यथा सबैको लागि दुर्भाग्य हुन जान्छ । त्यसैले नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनालाई अलग-अलग नराखी दुवै सेनालाई एकै ठाउामा राखी राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
० सेना समायोजनमा सहयोग पुर्‍याउन आएको अनमिनलाई माओवादीको पक्ष लियो भन्दै म्याद थप नगर्ने तयारी भइरहेको छ भनिन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
अनमिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतको साझा संस्था हो । त्यसैले मध्यस्थकर्ताको रूपमा हामीलगायत तत्कालीन सात पार्टीले स्वीकार गरेका हौा । युद्धकालमा रहेको पार्टी र संसदीय पार्टीहरूको बीचमा समझदारी भएर नै अनमिनलाई हामीले भित्र्याएका हौा । अनमिनको भूमिकाको ’boutमा हामी छलफल, बहस गर्न सक्छौा, उसका कमीकमजोरी हुन सक्छन् र हामीले पनि अनमिनसागको व्यवहारमा कमीकमजोरी गरेका हुन सक्छौा, त्यसको उचित समीक्षा हुनु आवश्यक र जरुरी पनि छ । त्यो छलफल र समझदारीबाट टुङ्ग्याउने विषय हो । जहाासम्म अनमिनलाई आरोपित गर्ने विषय छ, यो कसैलाई फाइदाजनक छैन । तथ्यविहीन ढङ्गले आरोप लगाउादा कसैलाई फाइदा हुादैन । अनमिनले कसैको पक्ष लिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन । अनमिनको आवश्यकता अहिले पनि छ । शान्तिप्रक्रिया सही ढङ्गले हल नहुादासम्म अनमिनको आवश्यकता रहिरहन्छ ।
० तपाईं सभासद्समेत भएको नाताले, अब थप भएको समयभित्र संविधान बन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सभासद्को नाताले यसको जवाफ दिनुपर्दा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, किनकि संविधान निर्माण गर्न दुई वर्ष समय तोकिएको थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । संसारभरिका इतिहास हेर्दा जहाा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने कोसिस गरियो, त्यो हेर्दा विभिन्न समय र क्रममा संविधान निर्माण भएको देखिन्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि करिब ४-५ वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गरिएको थियो । हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा दुई वर्षभित्र सक्छौा भनी समय तोक्यौा र सक्थ्यौा पनि । हामीले संविधानसभाभित्र धेरै मेहेनतका साथ काम पनि गरेका हौा, हरेक समितिमा छलफल र बहस पनि गर्‍यौा, करिब-करिब नब्बे प्रतिशत काम हामीले टुङ्गयाई पनि सकेका छौा । त्यसकारण सभासद्को नाताले भन्नुपर्दा हामीले मिहिनेत नगरेका पक्कै होइन । हामीले राम्रो मिहिनेत गरेर संविधान निर्माण गर्ने कोसिस गरेका छौा । तर, राजनीतिक पार्टीको सोचाइहरूको अन्तरले गर्दा केही राजनीतिक विषयहरूमा सहमति बन्न सकेन र समयमा संविधान बन्न सकेन भने अर्को पक्ष सरकारका कामकारवाहीमा पनि विवाद हुने, झगडा हुने, संघर्ष हुने प्रक्रिया पनि बन्यो । जसका कारण समयमा संविधान बन्न सकेन । यो हामी सबैले अनुभूति गरिसकेको विषय हो । सााच्चै राजनीतिक सहमति राम्रो बन्ने हो भने अब संविधान बनाउन एक महिना समय भए पुग्छ । एक महिनाभित्र जुन बााकी रहेको १०-१५ प्रतिशत काम छ, त्यो पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अहिले राष्ट्रभित्र जुन सरकार बनाउने सवालमा अनिर्णयको बन्दी बन्दै गरेको छ । वैदेशिक शक्तिहरूले सिधै हस्तक्षेप गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरू पनि आˆनो विवेकको भरमा चल्नेभन्दा पनि विदेशीहरूको इशारामा गुलाम भएर चल्ने काम भइरहेको छ । यसको प्रभावले पनि समयमै संविधान बन्ने सवालमा पुनः प्रश्न उठेको छ । जनताको मनमस्तिष्कमा जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, त्यो प्रश्न सबैको मनमस्तिष्कमा उठ्नु स्वभाविक हो । राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णयको विकास हुने हो भने समयमै संविधान बन्छ । संविधान राम्रो बन्छ, हाम्रो बन्छ र जनताको बन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
० अन्त्यमा यस क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकमार्फत् थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
“देश धेरै नै संकटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढ्दैछ । एउटा अन्योलतापूर्ण स्थितिबाट अगाडि बढ्दैछ । मिडियाभित्र दुईवटा सोच छ । एउटा सोच “यो राष्ट्रभित्र काम गर्ने मानिसले स्वतन्त्रतापूर्वक देशको उन्नति प्रगतिका निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ” अर्कोतिर केही मिडियाका मानिसहरू “यो देश अझै भााडभैलोमा जाओस्, अस्थिरता पैदा होस्, त्यसैका निम्ति विषयवस्तुहरू खोजीनीति गर्दै अन्तरविरोधहरू बढाइराख्न पाइयोस् भन्ने सोचमा छन् । यो विपरीत सोच भएको अवस्थामा यो देशलाई माया गर्ने राष्ट्रिय स्वाभिमान राख्न चाहने मिडियाहरूले यो देशको ’boutमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । जसको सोचाइमा दरिद्रता बढेर गइरहेको छ, स्वाभिमानी सोचहरूमा खिया लाग्दै गइरहेको छ । उहााहरूले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, यो राष्ट्रको निम्ति एउटा राष्ट्रिय भावना र देशभक्तिपूर्ण भावनाको साथ यो देशको उन्नति र प्रगतिलाई सोच्न सक्ने मिडियाको अहिले जरुरी छ । देश र जनताको लागि सबै गम्भीर भएर अगाडि बढौा यही भन्न चाहन्छु ।